ई—रिक्साका लागि उपयुक्त ब्याट्री « Anumodan National Daily
ई—रिक्साका लागि उपयुक्त ब्याट्री
प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७३, शुक्रबार १०:१०
नगेन्द्र खनाल, कन्ट्री म्यानेजर, बतास अर्गनाइजेशन
धनगढीमा पनि बिक्री सुरु भएको डेल्टा ट्युवलर ब्याट्रीका खास विशेषता के हुन् ?
– अहिले नेपालका तराईका शहरबजारहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा ई—रिक्सा (विद्युतीय रिक्सा) चलिरहेका छन् । ई—रिक्सा चल्ने नै ब्याट्रीबाट हो । तर, बजारमा हाल पाइने अधिकांश ब्याट्री धेरै टिकाउ छैनन् । प्रयोग भएको आधा वर्ष नपुग्ने बेकार हुने समस्या छ । दिनमा दुईतीन पटक चार्ज गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले ई—रिक्साधनीले बढी विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने र मर्मतसम्भारमा बढी खर्च गर्नु परिरहेका छ । यी समस्याबाट छुट्कारा दिलाउन नै यहाँ पनि डेल्टा ट्युवलर व्याट्री बिक्री सुरु गरेका छौँ । धनगढीमा विश्वलक्ष्मी एण्ड हिरा ट्ेरड कन्सर्न यो ब्याट्रीको आधिकारिक बिक्रेता रहेको छ ।
यो जर्मनी प्रविधिको ट्युवलर प्लेट भएको व्याट्री हो । यो ब्याट्री एक वर्षभन्दा बढी चल्छ । हाल बजारमा पाइने ब्याट्रीमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत व्याट्री ६ महिना पनि नटिक्ने खालका छन् । त्यस्तै, यो ब्याट्री एक पटक चार्ज गरेपछि न्यूनतम एक सय किलोमिटरसम्म चल्न सक्छ ।
बतास अर्गनाइजेशनले अरू के के उपकरण बिक्री गरिरहेको छ ?
– बतास अर्गनाइजेशनले सबै प्रकारका सोलार, ईन्भरटर र ब्याट्रीहरू विक्री गरिरहेको छ । धनगढीमा अरू सवारी साधनका लागि डेल्टा ब्याट्री पाइन्छन्, हामीले मङ्गलवारदेखि विद्युतीय रिक्सालाई दृष्टिगत गरी
डेल्टा व्याट्री बिक्री सुरु
गरेका छौँ । त्यस्तै, धनगढीमा दुई दिने नि:शुल्क क्पाम्प पनि चलाएका छौँ ।
यो कस्तो खालको क्पाम्प अथवा शिविर हो ? यो क्याम्पमा व्याट्रीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?
कति मात्रामा र कस्तो पानीको उपयोग गर्ने लगायत पक्षमा रिक्सा चालकहरूलाई जानकारी दिएका छौँ । व्याट्रीको उचित ढङ्गले हेरचाह नगर्दा ब्याट्रीको क्षमता कम हुन्छ । व्याट्रीको लाइफ बढाउन ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जानकारी दिएका छौँ । दुई दिनको शिविरमा सयौँ ई—रिक्सा चालक तथा अन्यले आवश्यक जानकारी पाएका छन् ।
डेल्टा बिक्रीको मूल्य कति छ ?
– एक सय ४० एम्पियरको व्याट्रीको मूल्य २२ हजार र एक सय २० एम्पियर क्षमता व्याट्रीको मूल्य १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।